Ciidamada amaanka Puntland oo ka hor tagay weerar u qorsheysnaa Al shabaab – Somali Top News
Ciidamada amaanka Puntland oo ka hor tagay weerar u qorsheysnaa Al shabaab
Ciidamada amniga dowlad Goboleedka Puntland oo howlgal ka dhan ah Al-shabaab ka fuliyay deegaano ka tirsan Buuraha Cal Madow ee maamulkaasi, ayaa waxa ay sheegeen iney ka hor tageen weerar abaabulnaa.
Puntland ayaa sheegtay in howlgalkaasi ay uga hortageen weerar kaga yimid dhinca Al-shabaab ee ku sugan Buuraha Cal Madow gaar ahaan Buuraleyda Warbad iyo Gebidheer,isla markaana ay fashiliyeen weeraradaasi.
Sidoo kale dowlada Goboleedka Puntland ayaa sheegay in weeraraasi Al-shabaab ay la damacsanaayeen Xarumaha Ciidamada Puntland ay ku sugan yihiin ee ku yaalla Buuraha Galgala waa sida ay hadalka u dhigeen.
Buuraha Galgala ee Gobolka Bari ayaa waxaa ku sugan dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab,kuwaasi oo mararka qaarkood weeraro ku qaada Ciidamada Puntland ee ku sugan halkaasi.
← Dowladda Kenya oo Soomaaliya u aqoonsatay dal cadoow ku ah
Hay’ad Sirdoon ah oo sheegtay in Soomaalida ku kala biirayaan Al shabaab iyo Daacish →
Faah-faahino ka soo baxaya weerar Al shabaab ku qaadeen xeradii hore ee Hiilwyne ee dagmada Balcad
December 12, 2019 Somali Top News 0